120hz dia hanana ny efijery 2K an'ny Samsung Galaxy S20 | Androidsis
Ny fampisehoana Galaxy S2 120hz 20K dia voamarina
Ice Galaxy, ilay kitty mpampahalala vaovao be mpahalala indrindra amin'ny rehetra, dia nilaza izany ny fampisehoana 2k 120hz an'ny Galaxy S20 zava-misy io rehefa atolotra amin'ny volana feb.
Miresaka momba ny inona isika Samsung dia hanampy ny tanjaky ny kalitao avo lenta ny efijery misy ny traikefa malefaka indrindra izay ampiasain'ny mpilalao eo amin'ny efijery PC nomaniny.
Rehefa misy tsaho madiodio ao amin'ny toerana maizina indrindra amin'ny tambajotra Twitter izay Ice Universe no ho CEO avy amin'ny orinasa koreana mihitsy, ankehitriny dia maniry bebe kokoa hahalala sy hahita ny toerany ny 120hz amin'ilay efijery Samsung izay mampanantena fa ho zava-mahatalanjona amin'ny haitao.
Voamarina fa tsy foanana ny 2K 120Hz. Tsy fahazoan-kevitra izany. Tsy ho diso ny fitambarana tonga lafatra amin'ny fampisehoana tsara indrindra sy ny traikefa malefaka indrindra ianao. Andao hiandrasana ny 11 Febroary. pic.twitter.com/wKXDORIml7
- Universe dessinée (@UniverseIce) Janoary 10, 2020
Ary na dia fantatsika aza fa ny tompon'ny Galaxy S20 vaovao, izay hantsoina ihany koa fa tsy izay tokony ho toa S11, dia afaka milalaova PUBG Mobile miaraka amin'ny 90FPS misaotra an'ity efijery vaovao ity, ireo 120hz mijoro ho hira tsara indrindra ho tohanan'ny mpividy any aoriana.
El 11 Febroary no andro izay ny tampon-tampon'ny vaovao an'ny Samsung dia haseho amin'ny olon-drehetra ary mikasa ny hitondra bateria lehibe, ireo 120hz eo amin'ny efijery ary andian-toetra iray hafa izay fantatsika tato ho ato; ary toy ny tsaho foana fa tsaho fotsiny.
Fantatsika koa izany hiaraka amin'ny telefaona vaovao mivalona an'ny orinasa, izay nantsoina toy ny Galaxy Bloom; Mahatakatra ny toetrany isika rehefa manokatra azy io ary afaka mamoritra. Noho izany Samsung dia efa niomana bebe kokoa tamin'io andro io hanohy ny fandefasana feo toy ny Galaxy Note 10 teo aloha, Galaxy S10 ary ny tampon'ilay faritra teo aloha.
Aza adino io andro io ary ny zava-drehetra mbola tokony ho fantatra momba ny Galaxy S20 avy amin'ny andalanay ao amin'ny Androidsis.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny fampisehoana Galaxy S2 120hz 20K dia voamarina
Hidio ny mikrônan'ny findainao ary soraty amin'ny Past Recorder ny lasa
Hisense dia mampiseho telefaona misy efijery e-ink miloko